အဆိုပါကွန်ပျူတာ HARD DRIVE ကိုမမြင်ရပါဘူး - HARD DISK ကို - 2019
အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာ hard drive ကိုမမြင်ရပါဘူး
အဆိုပါ CPU ကိုအပေါ်တိုးမြှင့်ဝန်ဟာဘရိတ်စနစ်ဖြစ်ပါသည် - applications များကြာကြာဖွင့်, ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရန်, သငျသညျစနစ်ကဲ့သို့သောအချိန်ပုံမှန်အားဖြင့်နောက်တဖန်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးသည်အထိအဓိကကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကို (အထူးသဖြင့် CPU ကို) အပေါ်ဝန်စစ်ဆေးကြောင့်လျှော့ချရန်ချင်တယ်။
ခေတ်သစ်ဂိမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂရပ်ဖစ်နဲ့ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ, server ကိုအစီအစဉ်များ: အဆိုပါ CPU ကိုဝန်မိုးသည်းထန်စွာ program ကိုဖွင့်လှစ်။ မိုးသည်းထန်စွာအစီအစဉ်များနှင့်အတူအလုပ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်သူတို့ကိုပိတ်ဖို့ရန်နှင့်လှည့်ကြဘူးသေချာပါစေ, အရှင်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏အရင်းအမြစ်များကို save လုပ်ပါ။ တချို့ကအစီအစဉ်များကိုပင်နောက်ခံပိတ်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့အားဖြင့်ပိတ်ဖို့ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် "Task Manager ကို".
သင်သည်မည်သည့် Third-party အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းမလာကြနှင့် CPU ကိုဝန်အဆင့်မြင့်တတ်လျှင်, အတော်ကြာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်:
ဗိုင်းရပ်စ်။ ပုံမှန်အလုပ်ခက်ခဲစနစ်ဖို့သိသိသာသာထိခိုက်ပျက်စီးမှု, ဒါပေမယ့်သိပ်ဝန်ကဖြစ်ပေါ်စေမအများအပြားဗိုင်းရပ်စ်ရှိပါတယ်;
registry ကို "ခုံဖိနပ်" ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, OS ကိုအကျင့်ကိုကျင့်အမြောက်အမြားအတွက် PC ကို၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်သိသိသာသာဝန်ဖန်တီးနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသော bug တွေနှင့် Junk ဖိုင်များကို, စုပြုံ;
အစီအစဉ် "Startup စာမျက်နှာ"။ အချို့ကဤအပိုင်းကိုထည့်သွင်းနဲ့ Windows နှင့်အတူအသုံးပြုသူရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် (အ CPU ကိုအပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံးဝန်စနစ်က startup ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်);
စနစ်ယူနစ်အတွက်စုဆောင်းဖုန်မှုန့်။ သူ့ဟာသူက CPU ကို၏အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းစေသည့်အတွက် CPU ကို load, ဒါပေမယ့်အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စေနိုင်မပေးပါ။
ဒါ့အပြင်ကွန်ပျူတာ system လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုအလွန်အလုပ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်အရည်အသွေးလျော့နည်းစေကြောင်း, အတော်လေးပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်နဲ့ run ပေမယ်က CPU ကိုအပေါ်အများဆုံးဝန်ရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 1: Clear ကို "Task Manager ကို"
ဖြစ်နိုင်လျှင်ကွန်ပျူတာကနေအများဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုယူသောအရာကိုဖြစ်စဉ်များမှာပထမဦးစွာကြည့်, သူတို့ကိုကို turn off ။ အလားတူပင်, သင် operating system ကိုတင်ဆောင်သောအစီအစဉ်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်သည်သူတို့လုပ်ဆောင်သောအရာကို function ကိုမသိကြပါလျှင်, စနစ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ (အခြားသူများထံမှသူတို့ကိုခွဲခြားတဲ့အထူးသတ်မှတ်ရေးရှိသည်) ကို turn off မထားပါနဲ့။ သာအကြံပြုအသုံးပြုသူဖြစ်စဉ်များကိုပိတ်ထားပါ။ စနစ်ကဖြစ်စဉ်ကို Disable / ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်ကပြန်ဖွင့်သို့မဟုတ်သေခြင်းတရား၏အပြာရောင် / အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာမှသာလြှငျသုံးနိုင်တယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်များဖြစ်ပါသည်:
သော့၏ပေါင်းစပ် ကို Ctrl + Shift + Esc ဖွင့်လှစ် "Task Manager ကို"။ သငျသညျကို Windows7ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းတွေဗားရှင်းရှိပါကထို့နောက် key combination ကိုသုံး Ctrl + Alt + Del နှင့်စာရင်းထဲက select လုပ်ပါ "Task Manager ကို".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "လုပ်ငန်းစဉ်"ပြတင်းပေါက်၏အထက်ပိုင်း၌တည်၏။ စာနယ်ဇင်းများ "နောက်ထပ်ဖတ်ရန်"(နောက်ခံအပါအဝင်) အားလုံးပြေးဖြစ်စဉ်များကိုတွေ့မြင်ဖို့ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေ၌တည်၏။
အဆိုပါ CPU ကိုအပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံးဝန်ရှိသည်သောသူတို့အားအစီအစဉ်များ / ဖြစ်စဉ်များကိုရှာပါ, သူတို့အပေါ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အောက်ခြေရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သူတို့ကို disable "Task ကိုရပ်တန့်".
ထို့အပြင်မှတဆင့် "Task Manager ကို" သငျသညျကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ် "Startup စာမျက်နှာ"။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်:
ပြတင်းပေါက်၏အထက်ပိုင်းမှာတော့သွားပါ "Startup စာမျက်နှာ".
အခုတော့အကြီးမြတ်ဆုံးဝန်ရှိသည်သောအစီအစဉ်များကို select (ကကော်လံ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ် "၏ပစ်လွှတ်အပေါ်သက်ရောက်မှု") ။ သငျသညျစနစ်နှင့်အတူတင်ဆောင် program ကိုမှမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရင်မောက်စ်နှင့်အတူကကို select နှင့် button ကို click "Disable".
(သင် OS ကိုတင်ဆောင်ရပါကသူတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူးလျှင်) အကြီးမြတ်ဆုံးဝန်ပေးသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူကို item2လုပ်ပါ။
Method ကို 2: registry ကိုသန့်ရှင်းရေး
ကျိုးဖိုင်တွေကနေ Registry ကိုရှင်းလင်းဖို့, သင်ရုံဥပမာအထူးဆော့ဖျဝဲ, CCleaner ကို download လုပ်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအခမဲ့နှင့်လုံးဝ Russified နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူဗားရှင်း, paid နှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုအကူအညီ CCleaner ကိုအတူအမှားအယွင်းများများအတွက် registry ကိုရှင်းလင်းဖို့
Method ကို 3: ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည့်စနစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဖြင့် Information Processor ကိုအလေးပေးကြောင်းအသေးစားဗိုင်းရပ်စ်, ကလုနီးပါးမဆိုအရည်အသွေးမြင့်ဗိုင်းရပ်စ်စကင်အားဖွငျ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ် Kaspersky Anti-Virus ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးကိုစဉ်းစားပါ:
ဗိုင်းရပ်စ်စကင်ကိုပြတင်းပေါက်များတွင်နေရာချထားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းမှ navigate "ကိုစစ်ဆေးခြင်း".
လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ, သွားပါ "အပြည့်အဝ Scan ကို" ထိုသို့ run ။ ဒါဟာနာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးတွေ့ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။
ပြီးစီးသည့်အခါ Kaspersky သင်တို့ရှိသမျှကိုတွေ့သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်တွေကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ နာမတော်ကိုလာမယ့်အထူးခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပါ။
Method ကို 4: ဖုန်မှုန့်နှင့်အပူငါးပိအစားထိုးမှသင်၏ PC ကိုပျော်စေ
သူ့ဟာသူအသုံးပြုပုံမြေမှုန့် Processor ကိုအပေါ် load, ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန် CPU ကို cores ၏အပူကိုဖြစ်စေ, သင်၏ကွန်ပျူတာများ၏အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်မည်ဟူသောအအေးစနစ်ဖုံးကွယ်နိုင်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းရေး, သင်ခြောက်သွေ့သောအထည်ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ဖြစ်နိုင်ရင်အထူးသန့်ရှင်းရေးကို PC components များ, ဝါဂွမ်း swab နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပါဝါလေဟာနယ်သန့်စင်မှုအတွက်ရှင်းလင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူကဖုန်မှုန့်ကိုတွေ့ရာအရပ်ရှိသမျှတို့ကိုတစ်ဦးလက်သုတ်ပဝါ, Wipe ။ တပိုင်တနိုင်နေရာများတွင်တစ်ဦးဖြီး nonrigid နှင့်အတူသန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဟာနယ်သန့်စင်, ဒါပေမယ့်သာနိမ့်ဆုံးအာဏာကိုမှာဒီခြေလှမ်းအတွက်ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအေးကိုဖယ်ရှားနေစဉ်, အရက်ထဲမှာစိမ်ဝါဂွမ်းတုတ် / disk တွေသုံးပြီးအပူငါးပိ၏အဟောင်းအလွှာကိုဖယ်ရှား, ပြီးတော့အသစ်တခုအလွှာသက်ဆိုင်ပါသည်။
ခြောက်သွေ့တဲ့အပူအမဲဆီသည်အထိ 10-15 မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်း, ပြီးတော့အရပ်ဌာန၌အေးထည့်သွင်းပါ။
ဤအကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအသုံးပြုခြင်း, သင်သိသိသာသာ CPU ကိုအပေါ်ဝန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကအဆိုပါ CPU ကို၏လုပျငနျးအရှိန်မြှင့်ဖို့တောင်းဆိုကြောင်းအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကို download လုပ်ပါရန်အကြံပြုသည်မဟုတ် သင်သည်မည်သည့်ရလဒ်များကိုမရကြဘူး။
ဗီဒီယို Watch: Friki-Retrogamer especial "Retromadrid 2017". #FRG #Frikiretrogamer #jandrolion (သြဂုတ်လ 2019).
အဆိုပါ Phaser 3010 ပရင်တာ, အ Xerox များအတွက်ယာဉ်မောင်း Installing
ဘယ်လို Laptop ကို screen ကိုထောင့်ဖြတ်သိလား
YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် extension
မည်သည့်လက်ပ်တော့ဒါမှမဟုတ် desktop ကွန်ပျူတာများအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသည်။ ဤသည် device ကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့် stably အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ဘယ်မှာမှတ်စုစာအုပ် HP က Pavilion g6 များအတွက် software ကိုရဖို့ရန်သင့်အားပြောပြမည်, မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ဖို့ဘယ်လို။ ဆက်ဖတ်ရန်
Zona အစီအစဉ်: Addressing အမှားဆာဗာကိုရယူသုံး
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာ VKontakte ဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို